တောင်ပေါ်ခွေး - ဝီကီပီးဒီးယား
တောင်ပေါ်ခွေးမြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ချင်းတောင်တန်းတလျောက် မှ သဘာဝအတိုင်းလှပနေသော တောင်ပေါ်ခွေး များအားရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 'Chin Dogs or Myanmar North East Mountains Dogs' Chin Dogs are originally from Chin state of Myanmar. They are one of the dog original breed from Myanmar. These dog are Medium size dofs. Include in Spitz type dog breed that can be many beautiful different colours. They look like Shiba Inu but more fluffy on the legs and tails. Brave, loyal , intelligent , funny and cute.
၃ ချင်းတောင်ပေါ်ခွေး များစတင်မွေးမြူလာကြပုံ
၄ ချင်းတောင်ပေါ်ခွေး မျိုးစစ်မျိုးမှန် ရောင်းချသော ခွေးခြံများ
၅ မြန်မာနိုင်ငံ၌ အတွေ့ရများသော ခွေးများ
ချင်းခွေးတွေကို ချင်းပြည်နယ် မှာသာမက မြေပြန့်မှာပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးမြူလာကြတာကို အခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိလာတယ် ဘာကြောင့် ချင်းတောင်းတန်းက ခွေးတွေကိုသယ်ယူလာပြီး မွေးမြူဖြစ်ခဲ့ကြပုံကို တက်နိုင်သလောက်စုဆောင်းမေးမြန်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကိုညီလေးညို နှင့်မေးမြန်းချင်း ချင်းခွေးရဲ့စံကတော့ ခုထိမသတ်မှတ်ရသေးဘူးဗျချင်းပြည်နယ်မှာတောင် ဆောယော နဲ့မင်းတပ် မင်းတပ်နဲ့ကန်ပက်လက်မျိုးတွေ နည်းနည်းကွဲတယ်ခြုံကြည့်ရင်တော့ ၂မျိုးထွက်တယ်.. FOX TYPE နဲ့ WOLF TYPE ပေါ့ သူတို့တွေက အခုမှ အရိုင်းသာသာပဲရှိဦးမယ် ဒေသခံတွေက သေချာကျွေးမွေးပြုစုထားသူရှားတယတောထဲသဘာဝအတိုင်းနေတဲ့ ဝံပုလွေနဲ့ တောခွေး ခွေးအတို့ကနေဆင်းသက်လာတယ်လို့ယူဆရတယ် ​ဒါကြောင့် ခုချိန်ထိ wolf နဲ့ fox ရုပ်တွေ ရောမသွားသေးပဲ သိသိသာသာကွဲပြားတုန်း wolf type ကို စစချင်းခေတ်စားခါစက အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ်.. Bear face Monkey face စသဖြင့်ပေါ့ ငယ်တုန်းကဝက်ဝံရုပ်လေးနဲ့တူပါတယ် အမွှေးလဲချိန်ကျတော့ ဘာဘွန်းမျောက်မျက်နှာနဲ့တူပါတယ် အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျ ဝံပုလွေပုံပေါ်လာပါတယ်.. Wolf type တွေက အကောင်ထွားတတ်ပါတယ်.. ခြေဆစ်လက်ဆစ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်.. fox type ကတော့ ငယ်ကတည်းက စုတ်ချွန်းချွန်းနဲ့ fox ရုပ်သိသာပါတယ်.. ကြီးတဲ့အခါ အကောင်ညက်တတ်ပါတယ်.. Fox type ရဲ့ထူးခြားမှုက အမြီးမွှေး အလွန်လှပါတယ်.. တချို့နေရာတေဠမှာတော့ နှစ်မျိုးပေါင်း ရုပ်တွေ ထွက်နေပါပြီ စရိုက်ကတော့ တောခွေးစရိုက်မပျောက်သေးပါ မြေတူးမြေဆွ ကြွက်လိုက်ငှက်လိုက်ဗီဇတွေတွေ့ရတယ် မြေကျင်းတူးပြီး နေချင်ကြပါတယ် ချင်းခွေးက medium size ခွေးမျိုးဖြစ်ပါတယ် အရွယ်ရောက်ပြီးချင်းခွေးထီးတွေက ရှေ့လက်ကနေ ပုခုန်းကိုတိုင်းရင် ၁၈လက္မကနေ ၂၀လက္မအထိ ရှိတတ်ကြပါတယ် တကိုယ်လုံး ၁လက္မကျော်ရှည်တဲ့အမွှေးနှစ်ထပ် ရှိပြီး လည်ဆံမွှေး ​ကျောမွှေး တင်ပါးမွှေး အမြီးမွှေးတို့ဟာ ခန္ဒာကိုယ်ရှိ သူမာန်အမွှေးထက်မဖြစ်မနေ ပိုရှည်ပါတယ် နားရွက်ကတော့ ချွန်ပြီးထောင်တာ အတွေ့များပြီး နားကုပ်တွေလည်း ညှပ်ပြီးမွေးဖွားလာတတ်ပါတယ် ခွေးမတွေကတော့ အထီးထက်အနည်းငယ်ပုပါတယ်.. ခွေးမတွေက ၈လသားခန့်မှာ ပထမမြိုင်ကျပါတယ်.. သားမတင်ရင် ၄လဝန်းကျင်တစ်ခါ မြိုင်ကျတတ်ပါတယ်.. အချို့က ၆လ၈လတစ်ခါမြိုင်ကျတတ်ပါတယ် သားပေါက်ခါနီးရင် မြေကျင်းတူးပြီးကျင်းထဲ ပေါက်တတ်ကြပါတယ်.. အုပ်သင်းဖွဲ့ရတာသဘောကျပြီး တိရိစ္ဆာန်ချင်း ရန်လိုတာများပါတယ်.. ယေဘုယျပြောရရင် Hunting dog အမျိုးအစားအဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်.. တောင်ပေါ်တွေကုပ်ကပ်တက်ဖို့ ခြေချောင်းအပိုတွေပါလာတတ်ကြပါတယ် တောင်ပေါ်ကမွေးတဲ့ကောင်တွေက ရေကြောက်တတ်ကြပါတယ်...
ချင်းခွေးတွေကို ချင်းပြည်နယ် မှာသာမက မြေပြန့်မှာပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးမြူလာကြတာကို အခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိလာတယ် ဘာကြောင့် ချင်းတောင်းတန်းက ခွေးတွေကိုသယ်ယူလာပြီး စတင်မွေးမြူဖြစ်ခဲ့ကြပုံကို တက်နိုင်သလောက်စုဆောင်းမေးမြန်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ကိုညီလေးညို နှင့်မေးမြန်းချင်း ကျနော်က ချင်းခွေးစမွေးတဲ့အထဲမှာပါတော့ သူများမွေးတာကြိုက်ပြီး မွေးခဲ့တယ်လို့ပြောမရဘူး ပထမဆုံး ၉၆မှာစမွေးတာက ချင်းပြည်မှာတာဝန်ကျတဲ့ အဖေ့မိတ်ဆွေက ခေါ်လာပေးလို့စမွေးဖြစ်တာပါ..နောက် ၂၀၁၇ထင်တယ် အဲ့မှာစမွေးဖြစ်တာက ချင်းတောင်ပေါ်မှာ နတ်တင်သတ်စားမဲ့ခွေးလေးတွေကို ကယ်ရင်းစမွေးဖြစ်တယ်အဲဒါကံထူးပေါ့ နောက်တစ်နှစ်ကယ်စရာများလာပြီး ကိုယ်လည်းမမွေးနိင်လို့ ခွေးသယ်စာရိတ်တောင်းပြီး မန်းလေးက လူတွေကို သခင်ရှာပေးရင်း ချင်းခွေးခေတ်စားလာပါတယ် ပထမနှစ်မှာ အရောင်းအဝယ်အဆင့်ထိရောက်ခဲ့လို့ နတ်တင်ခါနီးခွေးလေးတွေကယ်ရင်း ဈေးချိုချိုနဲ့ ရောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် အဲ့နှစ် အကောင်ရာကျော်ကယ်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ် နောက်နှစ်တော့ ချင်းခွေးအရမ်းခေတ်စား လာပြီး တောင်ပေါ်မှာလည်း သတ်စားတဲ့ဓလေ့ပျောက်လုလုဖြစ်လာလို့ ကျနော်​ေ ွးမရောင်းဖြစ်ပါ အဲ့တာကတော့ အခြားခွေးမျိုးထဲကချင်းခွေးဘာလို့မွေးဖြစ်ရောင်းဖြစ်ခဲ့လည်းဆိုတာပေါ့ ကျနော်က ကယ်ချင်လို့စမွေးတယ် ကယ်ချင်လို့သူများကိုပေးတယ် လိုချင်သူများလာလို့ ကယ်ရင်းရောင်းရင်းလုပ်ခဲ့တယ် လက်ရှိ ချင်း၆ကောင်ရှိတယ် ထီး၃မ၃ ကြီးတဲ့အချိန်တော့ အမွှေးစုံချိန် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ ချင်းခွေးတိုင်းလှကြပါတယ်သိပ်အကွာကြီးမဟုတ်ပါဘူး.. ကိုက်တာဖဲ့တာနဲ့ အရေပြားရောဂါရှိရင်တော့ အမွှေးတုံးပြီး သိပ်မလှသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်၆ အဖြူပါ ရှားလည်းရှားပါတယ် ဆင်စွယ်ရောင်အဖြူတွေရှိပေမယ့် အဖြူဆွတ်ဆွတ်က ရှားပါတယ် ။
ချင်းတောင်ပေါ်ခွေး မျိုးစစ်မျိုးမှန် ရောင်းချသော ခွေးခြံများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ျားချင်းခွေးတွေကို ချင်းပြည်နယ် မှာသာမက မြေပြန့်မှာပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မွေးမြူလာကြတာကို အခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိလာတယ် ဘာကြောင့် ချင်းတောင်းတန်းက ခွေးတွေကိုသယ်ယူလာပြီး မွေးမြူဖြစ်ခဲ့ကြပုံကို တက်နိုင်သလောက်စုဆောင်းမေးမြန်းတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်ပေါ်ခွေး&oldid=670703" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၂၀:၃၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။